Al-Shabaab oo weerar khasaare geystay ka fuliyey gudaha Kenya – Hornafrik Media Network
Al-Shabaab oo weerar khasaare geystay ka fuliyey gudaha Kenya
Weerarkan oo ka dhacay deegaan lagu macagaabo Olla oo waqooyiga kaga beegan magaalada Mandhera ayaa lasoo sheegayaa in uu dhacay waabarigiii saakay, iyadoo xubno loo malaynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay fuliyeen weerarkaas.
Saldhiga la wareeray ayaa waxaa ku suganaa ciidan Police-ah, kuwaas oo lasoo sheegayo inay waxyeelo soo gaartay, inksta oo aysan si rasmi ah uga hadlin khasaaraha weerarka uu sababay.
Dhinaca kale kooxihii weerarka fuliyay ayaa hub culus waxay ku weerareen xarun ay lahayd shirkadda isgaarsiinta Safaricom, taas oo laga leeyahay dalka Kenya, goobjoogeyaal ayaa sheegay in bur bur xoog leh uu soo gaaray Anteenada shirkadda la weeraray.
Dowladda Kenya ayaa ciidamo dheeraad ah waxaa ay gaysay deegaanka si amniga ay usii adkeeyaan.
Al-Shabaab ayaa todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa ay kordhiyeen weerarada ay ka fulinayaan dalka Kenya, iyaga oo horay u shaaciyay in beegsigooda Kenya uusan joogsan doonin inta ciidanka Kenya ee qaybta ka ah howl galka midoowga Afrika ee AMISOM ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya.